Gallan oo sheegay in Al Shabaab laga saaray saldhig ku yaala Buuraha Cal Miskaad | Dhacdo
Home Wararka Maanta Gallan oo sheegay in Al Shabaab laga saaray saldhig ku yaala Buuraha...
Gallan oo sheegay in Al Shabaab laga saaray saldhig ku yaala Buuraha Cal Miskaad
Wasiirka Amniga Puntland, Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa sheegay in hawlgal aanu wax dhiig ah ku daadan ay Ciidamada Puntland kula wareegeen saldhig ay Al Shabaab ku laheyd Buuraha Cal Miskaad ee Gobolka Bari.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in Ciidamada Puntland ay gacanta ku dhigeen saanad hub ah iyo qalab ay Shabaabka u adeegsanayeen qaraxyada.
“Waxaa jiray hawlgalo in dhawaalaba socday oo ciidamada amniga ee Dowladda Puntland ay wadeen oo ka dhan ahaa argagixisada Daacish iyo Al Shabaab, labadaba. Hawlgaladaa waxa ay ka socdeen labada buurood ee Magaalada Boosaaso dhinacyada ka ah ee loo yaqaano Cal Madow iyo Cal Miskaad.” Ayuu yiri Wasiirka Amniga Puntland oo la hadlay BBC.
Wasiirka ayaa yiri “Maalintii shalay ahayd hawlgal dhinaca bariga magaalada ah ama buurahaan loo yaqaano Cal Miskaad ayay ka sameeyeen ciidamada amniga ee Dowladda Puntland, waxa ayna ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan mid ka mid ah saldhigyadii ay isticmaali jireen argagixisada Al Shabaab. Waxay kaloo gacanta ku dhigeen hub aad u fara-badan, qalab ay u isticmaalayeen ama u diyaariyeen qaraxyo, booshash diyaarsan oo sidii booshashkii ah, laakiin qaraxyo lagu diyaariyay iyo jaakadihii qaraxa. Sidoo kale miinooyin ay ugu talagaleen inay ciidamada u geliyaan oo diyaarsanaa bay hawlgalku ku soo qabteen.”
Isagoo hadalkiisa sii wato ayuu yiri “Arrimahaas oo dhan baa lagu guuleystay, Ilaahay (SWT) baa mahad iska leh, dhammaantoodna waxay ku jiraan gacanta ciidamada, saldhigiina iyagaa gacanta ku hayo.”
Wasiirka oo la weydiiyay qaabka ay Ciidamada Puntland kula wareegeen saldhigaasi ayaa ku jawaabay “La wareegga saldhigaasi wax iska caabin ah ciidanku kalama aysan kulmin. Argagixisadu markii ay ogaadeen in ciidamadu ay ku soo dhowyihiin aagga waa ay baneeyeen oo dhinacaasi shishe bay u gudbeen, ka dibna hawlgalkii waxa uu ku soo dhammaaday iyadoo aan wax iska caabin ah aysan ciidanku kala kulmin.”
Previous articleGalmudug oo maanta magacaabi doonto Xubnaha Guddiyada Doorashooyinka
Next articleGalmudug oo soo gudbisay Xubnaha Guddiga Doorashooyinka